» कल्पना दाहाल वा राजेन्द्र पाठक, कुन टिमले जित्ला दोहोरी भिडन्त ?
कल्पना दाहाल वा राजेन्द्र पाठक, कुन टिमले जित्ला दोहोरी भिडन्त ?
५ भाद्र २०७८, शनिबार २०:५७
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ५ भदौ । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ८ का लागि छैटौँ दोहोरी भिडन्त निक्कै रोचक रह्यो । छैटौँ दोहोरी भिडन्तमा प्रदिप रोका र कल्पना दाहालसँग मिना नेपाल र राजेन्द्र पाठकले दोहोरी भिडेका थिए । गत हप्ता भएको यो दोहोरी भिडन्तमा चारै जना प्रतियोगीहरुको चर्चा भएको थियो । उनीहरुको प्रस्तुति पश्चात राजेन्द्रलाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए भने मिनालाई दुई जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार र दुई जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । त्यस्तै प्रदिपलाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । कल्पनालाई दुई जना निर्णायकहरुले फो स्टार र दुई जना निर्णायकहरले थ्री स्टार दिएका थिए । स्टारका आधारमा यो साता यो दुबै टिम बराबर भएका छन् भने राजेन्द्र र प्रदिपलाई निर्णायकहरुले सर्वाधिक रुचाएका छन् । निर्णायकहरुले स्टारसँगै गोप्य रुपमा दिएका अंक र दर्शक भोटका आधारमा यो साता एक टिम उत्कृष्ट ८ का लागि छानिने छन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ८ मा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका तेह्रौँ जोडी हुन् मिना नेपाल र राजेन्द्र पाठक । उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत उत्कृष्ट १६ मा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत छानिएका पहिलो जोडी हुन् । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५९९ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकले हार व्यहोरेका थिए । तर उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत पून शोमा प्रवेश गरेका हुन् । फिजिकल अडिसनदेखि नै चर्चामा रहेका मिना र राजेन्द्र लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । उनीहरु चिनिएका गायक तथा गायिका पनि हुन् । मिना नेपाल ओखलढुङ्गाकी हुन् । प्रदेश नम्बर १ को ओखलढुङ्गा जिल्ला अन्तर्गत मोलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा जन्मिएकी उनी हाल परिवारसँगै काठमाडौँको कपनमा बस्छिन् । सानैदेखि गीतसँगीतमा रुचि भएकी मिनाले सानैदेखि गीत गाउन थालेकी थिईन् । गाउँबाट टाढाको सहरमा पुगेर क्यासेटहरु किन्दै गीत गाउन सिकेकी मिनाले सानैदेखि दोहोरी प्रतियोगिताहरुमा पनि भाग लिएकी थिईन् । उनको बुवाले सानैमा उनलाई बोकेर पनि गीत गाउन लाने गरेको उनी बताउँछिन् । काठमाडाँैमा आएपछि मामा र माईजुले पनि उनलाई गायनमा सहयोग गरेका थिए ।
मीनासँगै जोडी बाँधेर दोहोरी भिडिरहेका राजेन्द्र पाठक नुवाकोटका हुन् । दाह्रीवाला गायकका रुपमा चिनिएका राजेन्द्र शालिन शब्दहरु प्रहार गर्न माहिर छन् । नुवाकोटको तात्कालिन सुन्दरादेवी गाविस वडा नम्बर ५ मा जन्मिएका राजेन्द्र बाल्यकालदेखि नै गीत गाउने गर्थे । सानैदेखि अग्रजहरुको गीत गाउँदै हुर्किएका राजेन्द्रले सानैमा धेरै ठाउँमा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै जित पनि हासिल गरेका थिए । तर अध्ययनकै कारण उनले गाउने अवसरहरु पनि छोड्दै गए । धेरै वर्षपछि एसएलसी सकेपछि उनी काठमाडौँमा आएका थिए । हाल काठमाडौँको धुम्बाराहीमा बसोबास गर्ने राजेन्द्रका आमा, दुई दाई र दुई दिदीहरु पनि छन् ।
त्यस्तै दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १६ मा पुगेका दोस्रो जोडी हुन् कल्पना दाहाल र प्रदिप रोका । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तका क्रममा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ६१२.५ अंक प्राप्त गर्दै ५.५ अंकले जित हासिल गरेका थिए । कल्पना र प्रदिप चर्चित गायक गायिका समेत हुन् । उनीहरु दुबै जना लाईभ दोहोरीमा पनि चर्चित छन् । उनीहरु दुबै जना सिन्धुपाल्चोक निवासी हुन् । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ईन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा जन्मिएकी कल्पना दाहाल लोकदोहोरी क्षेत्रमा लागेको ५ वर्ष पुरा भएको छ । ५ वर्षको दौडान गायन क्षेत्रमा लाग्न ठूलो संघर्ष गरेकी कल्पना दोहोरीका श्रोताहरुमाझ चर्चित छिन् ।
कल्पनासँगै जोडी बाँधेर दोहोरी च्याम्पियनमा भिडिरहेका चर्चित गायक हुन् प्रदिप रोका । उनी सजन रोक्काका नामले पनि परिचित छन् । वि.सं. २०६८ सालदेखि लोकदोहोरी गायनमा आवद्ध भएका प्रदिपले गायन यात्राका सुरुका दिनहरुमा नराम्रा अनुभूतिहरु पनि संगालेका छन् । प्लम्बर काम गर्दै रेडियोमार्फत दोहोरी गायनमा छिरेका उनको संघर्षको कथा जोकसैका लागि प्रेरणाको श्रोत बन्नसक्छ । दोहोरी गायनकै क्षेत्रमा जागिर खोज्दै हिँडेका उनले दोहोरी साँझहरुमा गीत गाउने मौका पाए । तर उनले त्यहाँ नमिठो यादहरु पनि संगाले । आफुभन्दा अग्रजहरुले दोहोरी गाउन नआउने भन्दै हेप्ने घटनाहरुको लामो लिष्ट उनीसँग छ । तर उनी त्यसबाट विचलित भएनन् बरु निरन्तर गायनमा लागिरहे । तिनै भोगाईहरुले पनि आफुलाई आजको स्थानसम्म ल्याईपुराएको उनी बताउँछन् । प्रदिपको परिवारबाट कोही पनि गायन क्षेत्रमा नभएका कारण उनले परिवारमा पनि गायन क्षेत्रमा लाग्न निक्कै संघर्ष गर्नुपर्यो । आमाले केही सहयोग गर्नुभएपनि आजसम्म आफ्ना दाईहरुलाई समेत भाईले के गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा नभएको उनी बताउँछन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–